Real Madrid Oo Loo Sharraxay AFAR Sababood Oo Ku Qasbaya Inay Lasoo Saxeexato Erling Haaland Iyo AFAR Kale Oo Ay Tahay Inay Kaga Joogsato - Gool24.Net
Real Madrid Oo Loo Sharraxay AFAR Sababood Oo Ku Qasbaya Inay Lasoo Saxeexato Erling Haaland Iyo AFAR Kale Oo Ay Tahay Inay Kaga Joogsato
May 18, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Erling Haaland ayaa qaab xoog badan kula bilowday horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga oo Sabtidii dib loogu soo laabtay, muddo laba bilood ah oo uu caabuqa Korona u xayirnaa kaddib.
Laacibkan da’da yar ee bartilmaameedka u ah Real Madrid ayaa dhaliyey goolkii ugu horreeyey ee kooxdiisa, kaas oo uu kusii adkaystay rikoodhada cajiib ah ee sida joogtada ah loogu diiwaan gelinayo, waxaanu saxeexay goolkiisii 13aad 12 ciyaarood oo uu u saftay Dortmund.
19 jirkan oo qaybtii hore ee xili ciyaareedka kusoo qaatay naadiga RB Salzburg oo uu usoo dhaliyey goolal badan ka hor intii aanu bishii January usoo dhaqaaqin dhinaca Jarmalka.
Wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa waxa uu kooxda Real Madrid ee da’yarkan doonaysa uu u sheegay afar sababood oo ay tahay inay ka fikirto ka hor inta aanay heshiiskiisa u dhaqaaqin.
Wargeysku waxa kale oo uu Los Blancos u sharraxay afar arrimood oo kale oo lid ku ah kuwaas hore oo Zinedine Zidane iyo Florentino Perez ku riixaya inay sida ugu dhaqsaha badan uga hawl-galaan sidii ay ugala soo wareegi lahaayeen Borussia Dortmund marka uu suuqu furmo.
Siddeeddan arrimood ee afarba dhinac yihiin ayaa waxay yihiin:
Sababaha ay tahay in Real Madrid ay si degdeg ah ugu dhaqaaqdo Erling Haaland
1. Tirooyinkiisa: Tan iyo intii uu ku biiray Dortmund bishii January, Haaland waxa uu dhaliyey 13 gool 12 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah oo uu u saftay, taas oo ah rikoodh gool-dhalin ah oo ay u baahan tahay Real Madrid.
2. Da’da saxda ah: Waxa uu jiraa 19 sannadood, waxaana Haaland uu haystaa waqti badan oo uu ku horumarin karo ciyaartiisa, in uu Real Madrid ku qaato xilliga horumarkiisana, kaliya isaga ayay sii fiicnaynaysaa.
3. Weeraryahan dhab ah: Los Blancos waxay la’dahay weeraryahan dabiici ah oo No.9 ah. Zinedine Zidane waxa uu haystaa kaliya Karim Benzema laakiin waa ciyaartoy ka duwan nooca uu yahay Haaland oo dhamaystirkiisa iyo laaggiisa aan laaxinka lahayn ay si fiican usoo dhoweyn lahayd Los Blancos.
4. Dortmund oo ah koox ciyaartoyda iibisa. BVB waxa lagu yaqaanay sannadihii ugu dambeeyey inay iibiso ciyaartoygeeda sare. Tani waxay caawin kartaa Real Madrid oo ku qalqaalin karta in si fudud looga iibiyo laacibkan.
Sababaha ay Real Madrid uga joogsanayso
1. Waqtiga ciyaarta: Laacibka reer Norway waxa uu u baahan yahay waqti si uu goolal u dhaliyo, waxaanay tahay inuu khibrad ka helo Bundesliga ka hor inta aanu tallaabo u qaadin dhinaca Real Madrid.
2. Cadaadis: In Real Madrid loo ciyaaro waxay leedahay culays aan la mid ahayn kooxaha kale. Da’da Haaland waxay noqon kartaa mid togan, laakiin waxa kale oo suurtogal ah inay mid taban noqoto.
3. Kusoo bilaabashada ciyaaraha: Ciyaartoyda sida Haaland waxay u baahan yihiin inay si joogto ah ugu soo bilowdaann ciyaarta si ay horumar u sameeyaan. Borussia Dortmund wuxuu noqon karaa ninka ugu weyn sannadaha yar ee soo aaddan, laakiin Real Madrid, wax damaanad ah kama haysto, waxaana ku dhici karta sida Luka Jovic.
4. Meel ku habboon: Haaland wuxuu helay kooxdii ugu habboonayd ee uu ku horumarin lahaa xirfaddiisa. Maxaa ka fiican inaad hesho meel aad sare ugu qaaddo ciyaarahaaga iyo heerkaagaba ka hor inta aanad tegin Real Madrid ee aanad noqonin xiddig weyn?